Lauren RAJAOBELINA · Momba ny mpandray anjara · Global Voices teny Malagasy
Lahatsoratra farany an'i Lauren RAJAOBELINA
Ireo mpanakanto teratany meksikàna izay mihantsy ny marika sy ny fitsaratsaram-poana.
Mediam-bahoaka 18 Febroary 2021
"Ho anay, tsy fankalazana ny endrika ivelany, fomban-drazana na tantara mahasondriana ny andro Erantany ho an'ireo Vazimba Teratany . Fa kosa, tsy maintsy ekena ny fisian'ny fanandramana voarindra hanafoanana anay."
Eoropa Afovoany & Atsinanana 07 Febroary 2021
Nanjary resaky ny media sosialy tany Balkans tato anatin'ny herinandro vitsivitsy ilay tantara ratsy.
Mediam-bahoaka 05 Febroary 2021
Mitady tonian-dahatsoratra ho an'i Azia afovoany, manana ny fahaizany manitsy amin'ny fiteny Anglisy sy fahalalana lalina momba ny faritra, ny Global Voices. Ho tombony ny fahalalana ny fiteny eo an-toerana sy ny Rosiana.